Home / समाचार / के तपाईमा बिर्सने बानी त छैन् ? पढ्नुस् स्मरणशक्ति बढाउने केही टिप्स
के तपाईमा बिर्सने बानी त छैन् ? पढ्नुस् स्मरणशक्ति बढाउने केही टिप्स 0
उमेरसंगसंगै मानिसहरुको स्मरणशक्ति पनि कमजोर हुँदैं जान्छ । यहाँसम्म कि आफूले कहाँ सामान राखें भन्ने सम्झन पनि अप्ठेरो हुन्छ । यस्तो समस्या छ भने स्मरणशक्ति बढाउने खानेकुरा खानुपर्ने हुन्छ ।
मष्तिष्क हाम्रो शरीरको त्यस्तो अंग हो, जसको संकेतविना कुनै पनि अंगले काम गर्न सक्दैनन् । तर कतिपय बेला बढ्दो उमेरसंगै गलत बानी तथा आवश्यक पोषक तत्वको कमीका कारण पनि स्मरणशक्ति कमजोर हुन्छ ।
भुवन केसीको अनौठो प्रेम कथा, बिजया देखि जिया सम्म (भिडियो)